ပန်းဂေါ်ဖီပန်းဂေါ်ဖီသုပ် - ချက်ပြုတ်နည်းများ
အဆိုပါ grill အပေါ် cob အပေါ်အေးစက်နေတဲ့ပြောင်းဖူးချက်ပြုတ်ဖို့ဘယ်လို
ပန်းဂေါ်ဖီပန်းဂေါ်ဖီသုပ် နွေရာသီအတွက်အကောင်းဆုံးသောအရောင်အသွေးစုံလင်လှသည့်သုပ်စာရွက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မလွယ်ကူ၊ မယုံနိုင်လောက်အောင်ကျန်းမာပြီးအရသာလည်းရှိသည်။
နှင့်အတူအမှုတော်ကိုထမ်းရွက် ဘာဂါ , ကြက်သားရင်သားမီးဖုတ် ဒါမှမဟုတ် ဝက်သားခေါက် ။ ပန်းဂေါ်ဖီပန်းဂေါ်ဖီသုပ်တွင်အာဟာရရှိပြီးလန်းဆန်းစေသောအရသာရှိပြီးလူတိုင်းကလုံးဝချစ်ကြလိမ့်မည်။
တစ်နှစ်ပတ်လုံးဒီပန်းဂေါ်ဖီပန်းဂေါ်ဖီသုပ်အတွက်ပါဝင်ပစ္စည်းများရှာရန်လွယ်ကူသည်။ ငါသည်ဤစာရွက်များအတွက်အရသာပျားရည်မုန်ညင်းတစ်သင်းလုံးကကစားသမားကိုချစ်။ ဒီမှာစျေးဝယ်စာရင်းပါ
ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းနှင့်ပန်းဂေါ်ဖီ - ကျွန်ုပ်သည်ကြည်လင်ပြတ်သားသောအကြပ်အတည်းကိုပေးရန်ဤကုန်ကြမ်းများကိုစွန့်ခွာသည်။ သငျသညျပိုနှစ်သက်ချင်ပါတယ်လျှင်သင်ကသူတို့ကိုကင်နိုင်ပါတယ်။
မှတ်သားထားတာကပန်းဂေါ်ဖီသည်အလွန်ခဲဖွယ်ကောင်းသည်ကိုသတိပြုပါ။ ထို့ကြောင့်အလွယ်တကူစားရန်လွယ်ကူသောအပိုင်းအစများကိုဖြတ်ယူပါ။ (စကားပြောနေစဉ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်အမြောက်အမြားကိုသင့်ပါးစပ်နှင့်ပြည့်အောင်ကြိုးစားခြင်းထက် ပို၍ ဆိုးရွားသလား။ !)
သံလွင်ဆီနှင့် Mayonnaise သည် creamy base ကိုဖန်တီးသည်
Dijon mustard ကထပ်ထည့်တယ်၊ ငါကပိုကြိုက်တယ် ဘောဇဉ် dijon (အရာနီးပါးမည်သည့်ကုန်စုံစတိုးဆိုင်ရှိလိမ့်မည်) ။ သင်ဟာပျားရည် dijon ကိုအသုံးပြုနေတယ်ဆိုရင်သင်ဟာတစ်သင်းလုံးကကစားသမားအတွက်ပျားရည်ကိုဖြတ်တောက်ချင်ပါတယ်။
ပေါင်မုန့်ကိုလှော်လိုက်ရင်အချိုမှုန့်ထွက်တဲ့ဗာဒံသီးကအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ ၎င်းတို့ကိုအလယ်အလတ်မှအနိမ့်ကျအပူကို ၅ မိနစ်မှ ၇ မိနစ်ခန့်အထိမွှေးပေးပြီးခြောက်သွေ့သောဒယ်အိုးထဲတွင်ထားပါ။
ဘေကွန်, ငါတကယ်ပိုပြီးပြောရန်လိုအပ်ပါသလား ငန်သော၊ အရသာရှိသောအရသာထည့်သည်။ အဖြစ်ကောင်းစွာအပါအများအတွက်နည်းနည်း Save!
သငျသညျဆန္ဒရှိလျှင်သင်ဆက်ဆက်ဘေကွန်ထွက်ခွာနိုင်သည်, သို့မဟုတ်သင့်ရဲ့ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းနှင့်ပန်းဂေါ်ဖီအသုပ်မှအံ့သြစရာဖြည့်စွက်ဖြစ်ကြောင်းမဆို, slivered ဗာဒံသီးအဘို့အကုန်တယ် walnuts သို့မဟုတ် pecans အစားထိုးနိုင်ပါတယ်။
အများအားဖြင့်ရုံဖြတ်ခြင်းနှင့်တူးခြင်းတို့သည်ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းနှင့်ပန်းဂေါ်ဖီအသုပ်ပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ငါတို့၏အခြားမတူဘဲ ပန်းဂေါ်ဖီအသုပ်စာရွက် , ဒီပန်းကန်ပန်းဂေါ်ဖီချက်ပြုတ်ရန်မလိုအပ်ပါဘူး။ ဤတွင်ဖြစ်စဉ်ကို:
ဘေကွန်ကိုကြည်လင်ပြတ်သားပြီးယိုစီးကာပြိုကျသွားသည်။ (သင်ပိုနှစ်သက်ပါကဘေကွန်ကိုသုံးနိုင်သည်။ သို့သော်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဘေကွန်ကိုချက်ပြုတ်လျှင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
အသုပ်ပန်းကန်လုံး၏အောက်ခြေ (သို့) သီးခြားပန်းကန်လုံးထဲတွင်တစ်သင်းလုံးကကစားသမားများအားလုံးကိုပေါင်းစပ်ပါ။
အကောင်းဆုံးသောရလဒ်များအတွက်သင့်ကိုအဝတ်တစ်ထည်နှင့်တစ်ချောင်းခတ်။ အမှုမထမ်းခင်ထိုင်ခိုင်းပါ။ အထူးသဖြင့်သင်ကြိုတင်ပြုလုပ်ထားလျှင်၎င်းသည်အရသာရောစပ်ခြင်းနှင့်ပါ ၀ င်သောအရာများကိုအရည်ပျော်စေရန်ကူညီလိမ့်မည်။
ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းနှင့်ပန်းဂေါ်ဖီအသုပ်သည်ရေခဲသေတ္တာထဲ၌ 3-4 ရက်ကြာတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ဖုံးအုပ်ထားသောပန်းကန်တစ်ခုသို့မဟုတ်ကွန်တိန်နာအတွင်း၌ကိုင်ထားလိမ့်မည်။ ဒါဟာကြိုတင်အောင်အလွန်ကြီးစွာသောဘေးထွက်ပန်းကန်ပါပဲ။ ၀ တ်ထားသည့်အချိန်တွင်ပင် ၀ တ်ဆင်ထားသည့်ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းနှင့်ပန်းဂေါ်ဖီသုပ်တို့သည်မြည်တမ်း။ မရပါ။ တကယ်တော့သင်ဟာအရသာတွေပိုပိုပြီးဖွံ့ဖြိုးလာတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။
ဘာဒိန်ခဲ grit နှင့်အတူအစေခံရန်
ပို potluck ဘေးထွက်ဟင်း
အကောင်းဆုံးအာလူးသုပ်စာရွက် (လွယ်ကူသော) - ရှေ့ဆက်လုပ်!
Frito ပြောင်းသုပ် - potluck အကြိုက်ဆုံး
သခွားသီးကြက်သွန်သုပ် - လတ်ဆတ်ပြီးအရသာ!
Sweet Potato အသုပ် - အရောင်နှင့်အရသာ!
Creamy သခွားသီးသုပ် - ဂန္ထဝင် potluck သုပ်!
အီတလီခေါက်ဆွဲအသုပ် - ပြီးပြည့်စုံသော potluck ဘေးထွက်ပန်းကန်။
ပြင်ဆင်ချိန်ဆယ့်ငါး မိနစ်များ စုစုပေါင်းအချိန်ဆယ့်ငါး မိနစ်များ ဝန်ဆောင်မှု၈ စားသုံးခြင်း စာရေးသူHolly Nilsson Broccoli ပန်းဂေါ်ဖီသုပ်သည်နွေရာသီအတွက်အကောင်းဆုံးသောအရောင်အသွေးစုံသောအရသာရှိသောသုပ်စာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မလွယ်ကူ၊ မယုံနိုင်လောက်အောင်ကျန်းမာပြီးအရသာလည်းရှိသည်။ ပုံနှိပ်ပါ ပင်
▢၄ ခွက် ဘရိုကိုလီ ကုန်တယ်
▢၄ ခွက် ပန်းဂေါ်ဖီ ကုန်တယ်
▢¼ ခွက် ကြက်သွန်နီ အရက်
▢၆ ချပ် ဘေကွန် ချက်ပြုတ်နှင့်ပြို
▢½ ခွက် ပျားရည်ဆိတ်နေတယ်
▢၃ ဇွန်း မုန်ညင်းစေ့
▢၃ ဇွန်း သံပုရာဖျော်ရည်
▢၃ ဇွန်း ပျားရည်
▢၃ ဇွန်း မေonnaise
▢¼ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ကြက်သွန်ဖြူအမှုန့် တစ်ခုသို့မဟုတ်လေးညှင်းပွင့်ကြက်သွန်ဖြူ, minced
သော့ချက်စာလုံးပန်းဂေါ်ဖီပန်းဂေါ်ဖီသုပ် သင်တန်းAppetizer, အသုပ် ချက်ပြုတ်ခဲ့သည်အမေရိကန်© SpendWithPennies.com ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့်ဓာတ်ပုံများသည်မူပိုင်ခွင့်နှင့်ကာကွယ်ထားသည်။ ဤစာရွက်ကိုမျှဝေခြင်းကိုအားပေးပြီးတန်ဖိုးထားသည်။ မည်သည့်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုမဆိုချက်ချင်းကူးယူခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ကူးယူခြင်းများကိုလုံးဝတားမြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံအသုံးပြုမှုမူဝါဒကိုဒီမှာကြည့်ပါ ။